१ करोड लिएर अनुपसँग रोमान्स गर्दै सन्नी लियोनी ! « Ramailo छ
१ करोड लिएर अनुपसँग रोमान्स गर्दै सन्नी लियोनी !
भारतिय अभिनेत्री सन्नी लियोनी नेपानी फिल्म ‘पासवर्ड’मा अभिनय गर्ने भएकी छिन् । नेपाली फिल्ममा देखिने सन्नी लियोनीसँग अभिनेता अनुप विक्रम शाही र कलाकार बुद्धि तामाङले स्क्रिन सेयर गर्न भएका छन् ।
सम्राट बस्नेतको निर्देशनमा बन्ने यस फिल्मको लागि सन्नी लियोनीले भारतिय एक करोड भन्दा बढि लिएको स्रोतले खुलाएको छ । बेलायतको लण्डनमा छांयाकन हुने यस फिल्म अगस्ट २६ बाट फ्लोरमा जानेछ ।
बिक्रम जोशीको निर्माणमा रहेको यस फिल्ममा सन्नी लियोनी, अनुप विक्रम शाही, बुद्धि तामाङ बाहेक छुल्ठिम गुरुङ, बिक्रान्त बस्नेत, रविन्द्र झा, प्रविण खतिवडा, लिशा सुनार लगायत कलाकारको अभिनय रहने छ । २०१९ को सुरुवातीमा रिलिज गर्ने लक्ष्यका साथ यस फिल्मको छांयाकन गरिने छ ।
एबि इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा बन्ने फिल्ममा सौरभ लामाको छांयानक रहने छ । कोरियोग्राफी रामजी लामिछानेको रहने छ । फिल्म निर्मातामा हिराल जोशी र अमित बस्नेत रहेका छन् भने विक्रम जोशी क्रियटिभ निर्देशकको रुपमा आवद्ध छन् ।